संसारमा मनोबल भन्दा ठुलो केही हुँदैन – गौतम बुद्ध – Jagaran Nepal
संसारमा मनोबल भन्दा ठुलो केही हुँदैन – गौतम बुद्ध
एक पटक गौतम बुद्धले आफ्नो भिक्षुसंग एउटा वटवृक्षको तल बसेका थिए । धर्म चर्चा शूरु भएको थियो । उक्त क्रममा एक भिक्षुले प्रश्न गरे ‘प्रभु कोही मानिस कमजोरी र साधनहिन हुदाँ पनि कठिन भन्दा कठिन परिस्थितिमापनि ठुला ठुला काम गर्छन । जबकि राम्रो स्थिति भएका साधन सम्पन्न मानिसहरु उक्त काममा असफल रहन्छन् । यसको कारण के हो ? के पुर्वजन्मको कर्मको कारण अवरोध आइरहेको हो त ? ’
भिक्षुको प्रश्नमा बुद्ध बोले । उक्त समयमा बुद्धले एउटा प्रेरक कथा सुनाए –विराटनगरका राजा सुकीर्तिको नजिक लौहशांग नामक एक हात्ती थियो । राजाले धेरै युद्धमा यसलाई जितेका थिए । बाल्यकालदेखि नै लौहशांगलाई यस्तो तरिकाले प्रशिक्षण पाएको थियो उ मार्शल आर्टमा धेरै निपुर्ण थियो । जब पहाडी फलामका बालुवाहरु सेनाका अगाडी बज्थे, तब उनीहरु आफ्नो सेनामा पस्दै गरेका देखेर उनीहरुले तिनीहरुलाई कुल्चिदिन्थे ।
विस्तारै विस्तारै जन्मेपछि सबै प्राणीहरुको जवानी आउने हुदाँ लौहशाँग पनि बढ्दै गयो । उसको छाला चम्किदै गयो उसको बहादुरी पनि निरन्तर बढिरह्यो । विस्तारै हात्तीमा बुढ्यौलीपन आउन थाल्यो । तब हात्ती घरको सौन्दर्य मात्र भयो । उसको उपयोगिता र महत्व पनि कम हुदै गयो । उक्त समयमा उसलाई पहिलाको जस्तो सजिलो कतै बाट पनि भएन ।उसलाई दिने खाना पनि थोरै हुन्थ्यो, खानाले ऊ अघाउने थिएन् । उसको एक बृद्ध नोकरले खाना र पानीको व्यवस्था गर्थे । त्यो नोकर पनि बेलाबेलामा हराउने कारण ऊ धेरै भोकाउने गथ्र्यो ।
तिर्खाएका कारण पहिला गई राख्ने पोखरीमा गयो । उसले पानी टन्न पियो । हात्तीलाई नुहाउन पनि मन लागेकोले पोखरीमा पस्यो । हिलैहिलो भएको पोखरीमा हात्ती पसेपछि जति प्रयास गरेपनि निस्कन नै सकेन । र अन्तमा घाँटीसम्म हिलोमा गड्यो ।
जब यो खबर राजा सुकिर्तिले पाए उनी साह्रै दुखि भए । हात्तीलाई बाहिर निकाल्न धेरै प्रयास गरेपनि सबै असफल भयो । हात्ती दयनिय मृत्युको मुखमा परेकोमा सबै दुःखी भएका थिए । सबै प्रयास असफल भएपनि एक चलाख मन्त्रीले सैनिकहरुलाई त्यहाँ बोलाएर युद्धको संकेत भएको बाजा बजाउन आदेश दिए । युद्धका ड्रमहरु बजाउदै सिपाहीहरु तालमा हिड्न थालेका थिए । जस्तो कि तिनीहरुले फलामको औजारले हात्तीलाई आक्रमण गरिरहेका थिए ।
लौशशांगले चर्को स्वरले भन्यो र उसको सिपाहीहरु शत्रु भएको देखेर उसले उनीहरुलाई तर्काएर धकेल्दै ऊ पोखरीबाट बाहिर निस्कियो । उ सिपाही तिर दौडेकोले सिपाहीलाई निकै कष्ट दियो ।
यो कथा सुनेपछि तथागतले भने –‘भिक्षुहरु मनोबल संसारमा पहिलो हो । जब ऊ ब्युँझन्छ, बलिया र सक्षम व्यक्तिहरुले पनि असंभव देखेका कार्यहरु मानवले अप्रत्याशित तरिकाले सफलता प्राप्त गर्दछन् ।